Goorta la ciyaarayo horyaalka Talyaaniga oo wax laga bedeley! (Kulanka Juve-Milan oo ku jira) – Gool FM
Ma dhab baa in Robert Lewandowski uu wakiilkiisa ku amray inuu ka shaqeeyo sidii uu ugu biirin lahaa Real Madrid?
Barcelona oo war kasoo saartay halka ay marayaan wada-hadallada heshiis kordhinta ee Ousmane Dembele
Man City diyaar ma u tahay inay u tartanto hanashada Premier League? – Guardiola ayaa ka jawaabaya
Salah oo ka hadlay dareenkiisa kaddib markii uu kaalinta toddobaad ka galay liiska abaal-marinta Ballon d’Or 2021
Horudhac: Manchester United vs Arsenal… (Ka bogo rikoorrada la yaabka leh ee caawa la arki karo & Xaaladda xiddigaha labada naadi)
Liverpool oo guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Everton kulankii xiisaha badnaa ee Merseyside derby+ SAWIRO
Man City oo guul ka soo heshay kooxda Aston Villa oo ay ku booqatay garoonka Villa Park… +SAWIRRO
Hakim Ziyech oo guul farta ka saaray Chelsea oo booqatay kooxda Watford… +SAWIRRO
Real Madrid oo wali la qaban la’ayahay kaddib markii ay ka adkaatay Athletic Bilbao… +SAWIRRO
Lewandowski oo cadeeyay go’aankiisa ugu dambeeya ee ku aadan mustaqbalkiisa Bayern Munich… (Kooxdee ayuu doortay inuu ku biiro?)
Goorta la ciyaarayo horyaalka Talyaaniga oo wax laga bedeley! (Kulanka Juve-Milan oo ku jira)
Raage December 15, 2016
(Roma) 15 Dis 2016 – Waxaa isbedello lagu sameeyay kulamada Serie A-da Talyaaniga ilaa iyo 19-ka Febraayo, kulamadaas oo ay ku jiraan Milan iyo Juventus oo dib loogu dhigay kulanka Super Cup-ka dartii.
Hay’adda Lega Serie A ayaa ugu dambayn wax ka bedeshey shin-tiriska horyaalka, iyadoo xisaabtaku daraysa kulamada Champions League, Europa League iyo Coppa Italia.
Juventus iyo AC Milan ayaa isku wajahaya magaalada Doha oo ay ku dheelayaan Italian Super Cup 23-ka bishan Diseembar, sidaa darteed kulankooda Serie A ee bartamaha todobaadka waxaa loo riixay Arboco 8-da Febraayo.
*Kulamada todobaadka 22-aad ee Cagliari-Bologna iyo Fiorentina-Genoa waxaa kaliya lasoo hormarinayaa haddii middood Bologna ama Genoa ay usoo baxaan rubuc-dhamaadka Coppa Italia.
Arag dhamaad kulamada waqtigooda la bedeley:
Sun Feb 5
Ilkay Gundogan oo laga cabsi qabo inuu maqnaado inta ka harsan xiliciyaareed kan
Taageerayaasha Roma oo helaya war farxad leh ka hor kulanka Juventus